Yintoni iGoogle Scholar kunye nendlela yokuyisebenzisa | Iindaba zeGajethi
Imishini kaGoogle okoko yafika kwimarike ayikho enye ngaphandle kokuzama cwangcisa lonke ulwazi olufumanekayo kwi-intanethi ukuze eyona ibalulekileyo ifumaneke ngokulula. Okwangoku uGoogle usivumela ukuba sikhangele ngemifanekiso, iindaba, iividiyo, iimephu, amaxwebhu, kodwa ikwasivumela ukuba senze uphando kwizifundo, oko kukuthi, kwimisebenzi okanye kwizifundo ezipapashwe ziiyunivesithi kunye neemagazini ezizodwa.
Umsebenzi we Ezemfundo google Iyafana nayo yonke eminye imisebenzi eyinikelayo, kodwa iququzelela ukufikelela kwimibhalo ekhoyo kumathala eencwadi nakumathala eencwadi eyunivesithi kwihlabathi liphela. Kodwa Yintoni iGoogle Scholar? Ingaba isebenza kanjani?
Ndiyabulela kule nkonzo, abafundi abaninzi baphethukela kuyo endaweni yokuya kwilayibrari kwaye ukuchitha ixesha ukhangela ulwazi kwizifundo zabo, imisebenzi ... ngaphandle kokubala intuthuzelo esiyinikwayo ngokuba nayo ezandleni zethu imisebenzi evela naphi na emhlabeni enxulumene nesihloko esisifunayo ngelo xesha.
1 Sisinika ntoni uGoogle Academic?
2 Ahlelwa njani amaxwebhu
3 Ngaba ndingafikelela kuwo onke amaxwebhu abonisiweyo?
4 Ndingawagcina la manqaku?
5 Uyenza njani iGoogle Scholar
6 Uluhluza njani ulwazi kuGoogle Scholar
7 Ndingawafaka amanqaku am kuGoogle Scholar?
Sisinika ntoni uGoogle Academic?
Ukusuka kuGoogle Academic sinokufikelela kwiincwadi, iithisisi, amanqaku enzululwazi kwindawo enye ... naluphi na uhlobo loxwebhu olunxulumene noncwadi lwezifundo kwaye alufundanga kangako kuba lusibonisa uninzi lwamanqaku apapashiweyo ezona jenali ziphambili zesayensi.
Nge Google Scholar sinokukhangela ngesihloko, ababhali, upapasho ngokusebenzayo ngaphezu kweelwimi ezili-100. Ukongeza, uninzi lwamanqaku athetha ngezinye izifundo ayadityaniswa ukuze kungafuneki senze uphando olongezelelweyo ukwandisa ulwazi loxwebhu oluthile.
Ahlelwa njani amaxwebhu
Ukulinganiswa kunye nokulandelelana kweziphumo kuboniswa kubaluleke njengeziphumo esizibonisayo. Njenge-algorithm esetyenziswa nguGoogle kwiinjini yokukhangela, uGoogle Scholar usekwe kumbhali ofanayo, inani lamaxesha akhankanyiweyo, zombini umbhali kunye noxwebhu, apho lupapashwe khona kunye nexesha lokubonisana nalo. Le nkonzo ikwathathela ingqalelo ulwazi olubonisayo, oko kukuthi, ukuba iphelele okanye izele zizalathiso kwezinye izifundo.
Ngaba ndingafikelela kuwo onke amaxwebhu abonisiweyo?
Le nkonzo ayiniki nje kuphela ukufikelela kwinani elikhulu lamanqaku, i-theses, izifundo kunye nolunye uphando, kodwa kwiimeko ezininzi, sivumele ukufikelela kulo lonke uxwebhu. Kodwa hayi rhoqo, kuba ngamanye amaxesha, ikhonkco elibonisiweyo lisibonisa isishwankathelo nje, esibonisa indlela yokufikelela kwisicatshulwa esipheleleyo. Onke amanqaku agqityiweyo anokukhutshelwa kwiimeko ezininzi ngekhonkco kwifomathi yoxwebhu ebekwe ngasekunene kwesiphumo.
Ndingawagcina la manqaku?
Xa sifumana uxwebhu okanye inqaku esilifunayo, uGoogle Scholar usinika ithuba lokuba sikwazi yigcine kwilayibrari yethu ukuze sikwazi ukudibana nayo kamva xa siyifuna, ngaphandle kokubhenela kukhangelo kwakhona. Olu khetho lulungile xa sifumana amanqaku angafumanekiyo ukukhuphela, nokuba kungenxa yokuba engagqitywanga (ukufikelela kumda) okanye ngenxa yokuba ifomathi yenqaku yi-HTML hayi iPDf okanye .doc.
Uyenza njani iGoogle Scholar
Xa ukhangela, kuxhomekeke kwisifundo, uGoogle unako shiya amanqaku kunye nezalathandawo ezisetyenzisiweyo, ukufumana iziphumo ezingaphezulu. Kwimeko yeGoogle Scholar, uphando lwenziwa ngokuzishiya ukuze kuthintelwe ukubonisa iziphumo ezinokubonakala ngathi ziyahambelana nophando kodwa ekugqibeleni azinjalo.
Ayizukuthathela ngqalelo ukuba sibhala ngonobumba omkhulu okanye ophantsi okanye ukuba sigxininisa amagama ophando ngokuchanekileyo. Ukuba, umzekelo, siqhuba uphando ngegama elithi "lwenziwa njani ulwahlulo lweseli" Siza kufumana iziphumo ezibambekayo ukuba sisebenzisa kuphela amagama "ukwahlulwa kweseli".
Njengesiqhelo, ngaphandle kokuba isiNgesi lolona lwimi luthethwa kakhulu emhlabeni, kuye kwaba lulwimi oluqhelekileyo esinokuthi ngalo sinxibelelane naye nabani na, ukuze Ukuba ujonge iziphumo ngesiNgesi uya kufumana ulwazi ngakumbi Kuthekani ukuba ujolise kuphela ekukhangeleni iziphumo kwiSpanish okanye kulo naluphi na olunye ulwimi.
Uluhluza njani ulwazi kuGoogle Scholar
Ukuba sikhangela isihloko esingaqhelekanga ngaphandle kokuchaza ezinye iinkcukacha, uGoogle Scholar usinika inani elikhulu leziphumo esiza kuthi ngazo ukuchitha ixesha elininzi uzama ukufumana leyo iqulethe ulwazi oluyimfuneko isiphelo sethu. Ngethamsanqa, le nkonzo isinika ukhetho lokuqhubela phambili esinokucofa kulo ukuseka uluhlu lweziphumo, umbhali, owenza ukukhangela kuphela kwinqaku kwaye kungekuphela kwesihloko.
Nathi sinako ukwenjenjalo khangela amaxwebhu kwezinye iilwimi ukuba siqinisekisa ukuba ulwazi oluboniswe kulwimi lwethu alonelanga. Ukongeza, singasebenzisa inkqubo yokulumkisa ukusazisa nge-imeyile xa amanqaku amatsha ongezwe kwisihloko esithile.
Ndingawafaka amanqaku am kuGoogle Scholar?
Ukuze amaphepha ethu okanye amaxwebhu afumaneke kuwo wonke umntu ngeGoogle Scholar, kufuneka abekho ipapashwe yiyo nayiphi na ilayibrari okanye iiyunivesithi abasebenza ngenkuthalo namaxwebhu afumanekayo kule nkonzo. Ngale ndlela, uGoogle uthintela nabani na ekuthumeleni amaxwebhu angazange aqinisekiswe ngaphambili yiarhente.
Ekuqalekeni kwayo, ngo-2004, nabani na angalayisha kule nkonzo naluphi na uhlobo loxwebhu alwenzileyo ngaphandle kokudlulisa isihluzo sombutho, kodwa inkonzo yaqala ulahlekelwe yinxalenye yokuthembeka ngenxa yokuba bekuya ngokulula ukufumana amanqaku akumgangatho ophantsi kakhulu kwaye kungakhange kubekho naziphi na izingqinisiso zokuthelekisa olu lwazi.
Ukuba sinethamsanqa ngokwaneleyo ukuba eminye yemisebenzi yethu iyafumaneka kuGoogle Scholar, singavula iakhawunti ukuze sazi ngawo onke amaxesha inani lilonke elifumanekayo, apho amanqaku abhekisa emsebenzini wethu, ukuba kwabelwane okanye kukhutshelwe kangaphi ... Ukwazi ngokukhawuleza ukuba ngawaphi amanqaku, esele sikhankanyiwe, kufuneka sisebenzise umsebenzi wokuqeshwa, umsebenzi oza kusinceda ukuba sizibonise ngokukhawuleza onke amaxwebhu apho kuvela igama lethu okanye isiqwenga somsebenzi wethu
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » Yintoni iGoogle Scholar kunye nendlela yokuyisebenzisa
UGabriel Roberto VILLAMIZAR ALVAREZ sitsho
Isixhobo esisebenzayo esifumanekayo kuye wonke umntu ukuxhasa nasiphi na isifundo esikhoyo ngoku kwimeko yehlabathi.
Phendula kuGabriel Roberto VILLAMIZAR ALVAREZ
I-Commodore 64, i-retro inxityiwe kwaye inguqulelo encinci iyavela